Breaking News: News नया“ शक्ति नया“ विचार भएकाहरुको समूह ः भट्टराई
नयाँ शक्ति भनेको के हो ?
नयाँ शक्ति भनेको नयाँ नेपाल बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने नयाँ विचारसहितको नयाँ संगठन ढाँचा भएको नयाँ कार्यशैली सहितको शक्ति हो ।
किन आवश्यकता प¥यो यसको ?
हामीले अहिले ७० वर्षपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं । राजनीतिक क्रान्ति मुल रुपमा पुरा ग¥यौं । अब पालो आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो । आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व नयाँ शक्तिले गर्दछ । पुराना शक्तिले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैनन् भन्न खोज्नु भाहो ?
हो पुराना शक्तिहरुबाट अब आर्थिक क्रान्ति संभव छैन । राजनीतिक क्रान्ति त उहाँहरुले गर्नुभयो । यसका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । आर्थिक क्रान्ति गर्नको निम्ति उहाँहरुबाट मात्र संभव हुँदैन । उहाँहरुभित्र रहेका असल मान्छे, राम्रा सबै मान्छे मिलेर अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।
नाकाबन्दी किन भइरहेको छ नेपालमा ?
भारतको दुई सय वर्षदेखिको जुन एक खालको सामरिक स्वार्थ छ, नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राखिराख्ने भारतीय शासकहरुको जुन चिन्तन छ, त्यहीं स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति बेलाबखतमा उसले आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने गरेको छ । त्यसैको पुनरावृति अहिलेको नाकाबन्दी पनि हो ।
संविधानले सबैका समस्या समाधान गरेको छ । सबैका भावना सम्बोधन गरेको छ भनेर तपाईले बोल्नु भाथ्यो । संविधानले सबैका भावना सम्बोधन गरेको छैन त ?
सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षाता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भएको छ तर व्यवहारिक रुपमा सबैका सबै समस्या पुरा भएका छैनन् । त्यसैले मैले संविधान जारी गर्ने बेला पनि यो आधा गिलास भरी, आधा गिलास खालीजस्तोमात्रै छ मैले भनेको थिएँ । यथार्थ त्यही हो ।
बन्द, नाकाबन्दी, आमहड्ताल अन्त्यको उपाय के हुन्छ ?
देशभित्रको खासगरी थारु, मधेसी, जनजातीहरुले प्रदेशको सीमांकन मिलेको छैन भनेर जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ । यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो । प्रमुख शक्ति, सरकार र आन्दोलनकारी बसेर यसको हल गर्नुपर्छ । भारतसंगको बाह्य समस्या कुटनीतिक तरिकाले हल गरिनुपर्छ ।
नयाँ शक्तिमा पुरानै अनुहार, पुरानै मान्छे छन् भनिन्छ नि ?
मान्छे पुरानो हुनसक्छ तर विचार नयाँ हुनुपर्छ । विचार नयाँ भयो भने पुराना पार्टीका मान्छे पनि हुन्छन् । किनकी आकाशबाट टिपेर ल्याउने कुरा हुँदैन । तर नयाँ शक्तिमा पुराना मान्छेमात्र होइन । केही पुराना तर विचार नयाँ भएका मान्छे र अरु केहीचाँही धेरै नयाँ मान्छे कुनै पार्टीमा नलागेका मान्छे, नयाँ विचार भएका मान्छे छन् ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नयाँ सोंचसहितको नयाँ शक्तिको अभिायनमा हुनुहुन्छ तर थरुहट आदि जातीय राज्यका कुरा गरिरहनु भा’छ पुरानो भएन यो ?
जातीय राज्यको कुरा गरेको हैन । संघीयता भनेकै जसको आफ्नै भाषा, संस्कृति, इतिहास भएका जुन समुदाय हुन्छन तिनिहरुको निम्ती आफ्नो स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा नै संघीयताको अवधारणा हो । हामीले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छौं । देशको विकासका लागि तपाइको खाका र योजना के छ ?
नयाँ विकासको खाका भनेको १० वर्षभित्र गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गरि कृषि, पर्यटन, जलश्रोतको विकास गर्ने, २० वर्षसम्म नेपाललाई मध्यम विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउने र ४० वर्षमा उच्च विकासको स्तरमा लिएर जानको निम्ति वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानी परिचालन गर्ने हो । तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने र सम्पूर्ण जनतामा समृद्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने नै हाम्रो विकासको खाका हो ।
(प्रस्तुती ः दीर्घराज उपाध्याय)